192.168.8.1 - Nbanye Admin
IP address 192.168.8.1 bụ adreesị IP nkeonwe n'ime netwọkụ mpaghara, naanị ị nwere ike iji adreesị IP a na enweghị ike iji ya na ịntanetị. Ị nwere ike iji adreesị IP a 192.168.8.1 maka imeghe rawụta admin panel na ịme mgbanwe ole na ole na ndabara ntọala ya. Fewfọdụ n'ime mgbanwe ndị a gụnyere ịgbanwe paswọọdụ & aha njirimara, ntọala ntanetị, tinye firewall, na ntọala ngwaọrụ.
IP 192.168.8.1 A na-eji ya na-agwa ndị sistemu dị iche iche okwu n'ime netwọọdụ onwe. A na-ejikwa ya na nhazi ngwaọrụ ngwaọrụ site na iwebata usoro nbanye.
Hazi rawụta site na 192.168.8.1
Mgbe ị banyere n'ime rawụta interface na 192.168.8.1, oge eruola igbanwe ntọala iji mara nhọrọ mbụ gị. Nnukwu eriri nke ọnụọgụ & ndebiri nwere ike ịpụta na ọ enweghị ike ịbịaru nso, mana ị nwere ike izu ike dị mfe ịmara na ntọala niile nwere ike ịtọgharịa ọzọ na ndabara site na kụrụ bọtịnụ. Mana ọ bara uru ịmata ebe ị ga-ebido; n'ihi ya, ihe kachasị mkpa ị ga-agbanwe bụ nkọwa nbanye ndị ahụ edepụtara n'elu:
Họrọ ntọala nchịkọta nhọrọ
Họrọ rawụta paswọọdụ ma ọ bụ N'otu aka ahụ -named nhọrọ
Dee paswọọdụ ị họọrọ
Chekwaa mgbanwe ndị ahụ.
Ọbụna ị ga-enweta aha njirimara maka rawụta na menu yiri nke ị nwere ike ịgbanwe na aha nhọrọ mbụ gị.
Gbanwee Adreesị IP mpaghara 192.168.8.1
Otu ntọala ọzọ ị nwere ike ịgbanwe bụ adreesị IP mpaghara nke rawụta, tinyere n'ihu ọdịiche dị n'etiti ọha na eze na mpaghara adreesị IP kọwara n'okpuru. Ọ bụrụ na ịmee adreesị IP mpaghara gị nke rawụta, ị gaghị ama otu esi enweta rawụta site na 192.168.8.1, yabụ ị ga-emerịrị iji cheta adreesị gị kachasị ọhụrụ. Tergbanwe adreesị ahụ:
Gaa Leta Mbido menu ma ọ bụ myiri -named nhọrọ
See na nhọrọ netwọk ntọala.
N'okpuru ntọala rawụta, dee adreesị IP gị ịchọrọ
Otu n'ime adreesị IP ndabara bụ 192.168.8.1, mana n'adịghị 192.168.0.1 or 192.168.1.1 ọ bụghị ụlọ ọrụ na-ejikarị adreesị ụlọ a. Ọ ga-adị mma ịsị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile anaghị eji ya. Nanị na ihe a ekwenyeghi na ha, ebe ha nwere ọrụ yiri ya - ejiri abanye web interface nke rawụta.
Gbanwe Wi-Fi Network Aha
Site ntọala nke rawụta n'ezie gbanwetụrụ, i nwere ike na-amalite na-achọpụta ọzọ site aha nke rawụta si Wi-Fi network ịbụ a amamiihe ebe na-amalite. Ihe Ntọala Ọrụ ma ọ bụ SSID bụ aha na-ekewa Wi-Fi network nke router na ndị ọzọ nọ nso. Aha nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ịchọrọ ma ọ bụrụ na ọ naghị akpasu iwe. Site na ndabara, aha ahụ nwere ike ịbụ ihe a na - ahụkarị iji nyere aka ịmata ọdịiche dị na ntanetị ị ga -
Gaa na nchịkọta nhọrọ ndị ọzọ dịka nhọrọ akpọrọ
See na nhọrọ wireless ntọala.
Dee aha ntanetị ọkacha mmasị gị n'ime igbe SSID
Mgbe ịgbanwee aha nke netwọk Wi-Fi, ị nwedịrị ike idozi paswọọdụ. Paswọdu igbe ga-abụ na a yiri menu dị ka aha nke netwọk.
Ntọala ndị dị n'elu ga-eme ka ị nweta nchedo rawụta nke dị mkpa iji jide n'aka na mmadụ na-eme nchọgharị na netwọkụ na-eme nke ọma. Si ebe a, ị na-nnọọ na-achọpụta na nhọrọ nke gị rawụta ọzọ. Ọtụtụ ndị na-agagharị agagharị na-eso ntọala ndị nne na nna nke ị nwere ike ịtọ, ma ole na ole ga-ekwe ka ntọala ọtụtụ netwọkụ ma ọ bụ ọrụ VPN ọ bụla.
More na IP 192.168.8.1
192.168.8.1 A na-akpọ nke a ọnụ ụzọ ámá, onwe, ma ọ bụ mpaghara adreesị IP nke a na-ahụta n'elu nke netwọk Wi-Fi. 192.168.8.1 Gets ji ma nweta rawụta si interface & na-ekwe ka net-ruru ngwaọrụ jikọọ na rawụta. Nwere ike ịtụle adreesị IP nke rawụta gị dị ka PO Box maka akwụkwọ ozi. Nchịkọta niile ị nwetara site na post ọfịs na-aga na PO Box, n'agbanyeghị na ị ga-ezukọ, onye ntanetị ga-eziga post ahụ na ngwaọrụ PC nke chọrọ ya.
Ọ bụrụ na ị bụ njide ihe nke ngwaọrụ ahụ IP ndepụta & 192.168.8.1 bụ adreesị na-ezighi ezi, ị ga-ahụ windo nbanye mgbe ọ na-ede ya na akara ngosi nke ihe nchọgharị ahụ. Mgbe ahụ ị nanị chọrọ iji ndabara aha njirimara & paswọọdụ.
Nchọpụta nsogbu IP address 192.168.8.1
N'oge ụfọdụ na oge, ọ na-adịkarị na-enweta dị iche iche okwu na gị rawụta. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgafe ihuenyo nbanye, enwere ụfọdụ ihe ịchọrọ ịchọrọ. Nyochaa iji gosi na intaneti gị kwụ otu ebe na ọ naghị agbanwe agbanwe. Otu nhọrọ ọzọ bụ iji Iwu mee ihe iji chọpụta ọnụ ụzọ ndabara. Nwere ike iji adreesị IP na-ezighi ezi maka ịnweta njirimara ọrụ. Maka enyemaka ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-eweta ntanetị ịntanetị.
Enwere ụfọdụ ihe anyị kwesịrị ịgbaso iji banye na adreesị IP a wee mee mgbanwe ndị dị mkpa. Ihe kachasị mkpa bụ ịnọ na mpaghara netwọkụ rawụta ma ọ bụ banye naanị. Ihe mgbochi kachasị gbasara adreesị IP a bụ na enweghị ike ịhụ ya na WWW, ya mere ọ na-amanye anyị ịnọ na mpaghara netwọk nke rawụta ka ọ bịaruo nso na interface weebụ. Ihe nchọgharị weebụ anyị ga-abụrịrị mgbagwoju anya (Google Chrome, Mozilla Firefox, wdg) dịka usoro a chọrọ nkwado HTML5 mmapụta.
Ọ bụrụ na ị bụ onye njikwa nke rawụta nke nwe adreesị IP 192.168.8.1 wee site na iji Adreesị IP 192.168.8.1, I nwere ike ime ihe ọ bụla achọrọ alterations gị rawụta & ọbụna ịgbanwe ndabara ọnọdụ nke gị rawụta.
E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmekwu ọtụtụ na adreesị IP a dị ka ịgbanwe aha njirimara, paswọọdụ, ịchịkwa ntọala netwọk, nhazi firewall & ọtụtụ ndị ọzọ.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime njirimara ndị ama ama na adreesị IP 192.168.8.1.
Na-agbanwe Paswọdu & Aha ojii.
Settingschịkwa QoS & Ntọala Ntọala.
Unblocking & igbochi nke Ngwaọrụ.
Tọ ntọala Firewall & Ntọala Nche
Ọbịa Wifi Ipo.
Nwere ike gbanwee & gbanwee ntọala ndị a mgbe ị banyere ha webpage nke rawụta gị bụ nke adreesị IP 192.168.8.1. Na abanye na Adreesị IP 192.168.8.1, ịchọrọ ide na adreesị IP adreesị mmanya http://192.168.8.1 nke ihe nchọgharị gị ma ọ bụ pịa iji nweta nkwado nchịkwa nke gị rawụta na adreesị IP 192.168.8.1.
Ị ga-ahazikwa router gị ọzọ maka ojiji dị mma karịa. Enwere ntọala ndị ọzọ ị nwere ike ịtọ na panel nchịkwa nke rawụta. Ị nwere ike ịmụkwu ihe na ntanetị weebụ.
Ndepụta nke Aha ojii na Paswọdu maka 192.168.8.1
HUAWEI TMAR # HWMT8007079 ọnweghị
HUAWEI onye ọrụ onye ọrụ
Categories usoro Hapụ ikwu
Page1 Page2 ... Page8 Osote →
Ndi an-kpọ rawụta Paswọdu Ndepụta
IP Adreesị Ndepụta
2wire rawụta Banye
3Com rawụta Banye
3JTech rawụta Banye
Arris rawụta Banye
Asus rawụta Banye
Belkin rawụta Banye
Buffalo rawụta Banye
Cisco rawụta Banye
Comtrend rawụta Banye
D-njikọ rawụta Banye
Linksys rawụta Banye
TRENDnet rawụta Banye
ZyXEL rawụta Banye
IP ndị mara mma
Ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ